Ityotyombe leSurf: Linomtsalane, Izinyuko zokuya eLwandle, MP11
Thatha inyathelo emva kwexesha kwaye wonwabele i-Nags Head charm yakudala kokona kulungileyo. Indlu enkulu ekwipropathi, 'Surf Shack', sele ihlaziywe ngokupheleleyo. Inazo zonke izinto zale mihla esizifunayo, kunye nomtsalane wesikolo esidala we-1950s Nags Head.
ISurf Shack Cottages zikwiNdlela yoLwandle kwiMP 11, ngaphaya koFikelelo lwaseBainbridge Beach. Singamanyathelo amafutshane nje ambalwa ukuya elunxwemeni kwaye sisondele kakhulu kwiNags Head Pier, iindawo zokutyela, iivenkile kunye neJockey's Ridge. I-Nags Head Pier inomculo ophilayo ubusuku obuninzi ngeveki ehlotyeni. Umsebenzi wethu esiwuthandayo (ngaphandle kokutshiswa lilanga, kunjalo) kukuthatha iziselo ezibandayo ezantsi elwandle kwaye umamele iingoma ezisuka kwindawo yethu enesanti.
I-Surf Shack inamagumbi okulala ama-3, Ibhafu enye, Igumbi lokuhlala elikhanyayo elinomoya oqaqambileyo elinesilingi evalekileyo, ikhitshi kunye neDining/iLanga. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulu kwaye amagumbi amabini amancinci aneebhedi ezigcweleyo. I-cottage ixhotyiswe ngeTV entsha yescreen esicaba, intambo, i-intanethi yesantya esiphezulu, i-AC, indawo yokuhlamba impahla kunye negrisi yegesi. Ishawari yangaphandle inceda emva kokucoca ulwandle naphambi kokuhlamba ngesidlo sangokuhlwa. Yonwabela ikofu kusasa okanye i-cocktail ngokuhlwa kwenye yeeveranda ezimbini ezingaphambili.
Uxolo kwizinja, kodwa iSurf Shack Cottages ayizivumeli izilwanyana zasekhaya.
Yiza uhlale eSurf Shack Cottages, siyazi ukuba uya kuyithanda!
4.87 · Izimvo eziyi-93
Amanyathelo ukusuka elunxwemeni, yintoni enye into yokuthetha!
Le nkundla cottage iqulathe cottages ezimbini. Engaphambili, iSurf Shack, ihleli kwindlela yaseBeach ngaphaya kwendlela yokufikelela elunxwemeni lwaseBainbridge. ILil' Surf Shack ihlala ngasemva kwendlwana ephambili kwaye ijonge eBainbridge. Kungaphantsi kwezinyuko ezingama-200 ukuya esantini.
Sifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho. Sazise xa kukho into oyifunayo.